2018 RSW / US Metereter-Sangano Gore Idzva Maonero | Martech Zone
2018 RSW / US Marketer-Sangano Gore Idzva Maonero
China, Kukadzi 8, 2018 Chishanu, February 9, 2018 Douglas Karr
Kana iwe ukabvunza gumi nevaviri vevanoshambadzira agency varidzi zvavanoita, vangave kana kwete ivo vari kukura, uye nemabatiro avanowana kubva kumasevhisi avanopa… Ndine chokwadi chokwadi iwe unowana gumi nemaviri mhinduro dzakasiyana kubva kune yega yega. Ndine kusahadzika kushoma isu tese tinoda izvo zvatinoitira vatengi vedu, asi isu tese tinowana nzira yatakanaka ndokutungamira iko kunongedzera.
The 2018 RSW / US Marketer-Agency Gore Idzva Outlook Infographic yakavakirwa paongororo yedu yazvino, uye inotarisa kumatunhu maviri eindasitiri: kutanga, inoratidza kuti vashambadzi nemasangano vari, zvinoshamisa, zvakanyatsoenderana maererano nekiyi inoonekwa sedambudziko, mari inotarisirwa inowedzera, uye tarisiro yekudyara uye chechipiri, inonongedza mashoma akakosha maitiro ako ejensi anoda kuziva.
Sei Uchifanira Kubhadhara Sangano?
MaAgency ane zvakanakira chiyero izvo makambani asingakwanise kuenzanisa Sevamiririri, ini handifanire kuve nehanya zvakanyanya nezve zvematongerwo enyika zvevashandi, vashandi kunze vanorwara, kuwedzerwa kwevashandi, kana zvimwe zvinhu zvezuva nezuva zvinodzora makambani. Icho hachisi chekuchera kumakambani, hongu. Pane zvakanakira zvemukati zvikwata uye zviwanikwa, futi.
Patinofambira mberi nekambani, tinoita toni yebasa kumberi uye tobva tamhanyisa kukosha kwedu nekufamba kwenguva. Makambani anokoshesa kuti isu tine hunyanzvi hwavanoda nguva nenguva. Iko kubatana kukuru.
Zvese mune zvese, pamutengo wemushandi mumwe kana vaviri, unogona kazhinji kuwana timu yese kune iyo agency. Kwete izere-nguva, hongu, asi kunyangwe kuwana chikamu chidiki chenguva yezvakasiyana zvisikwa zvinogona kukanganisa zvakanyanya mashandiro emabhizinesi ako.
Ndosaka ichi infographic kubva kuRSW / US isiri chaicho kushamisika. Isu tinoshanda takabatana-ruoko nevashambadziri mazuva ese uye isu tiri mukukiya-nhanho navo kuona kuti vanoona kudzoka kukuru pane yavo yekushambadzira investa. Isu tinoisa mari zvakanyanya muhunyanzvi nekuti tinogona kuendesa iwo madhiri kunze kwevakawanda vatengi. Ndicho chikonzero nei tichiwanzove nematurusi akanakisa uye mapuratifomu ekushandira kubva mukuenzanisa nevatengi vedu - ibasa ratinogona kuwedzera kwavari.
Tags: bokaagency shandisadambudzikokushambadzira kwedhijitarikushambadzira shandisarfppasocial media shandisachipochinyakare agency shandisaMaitiro
Podcast Kushambadzira Iri Kuuya Kwezera